Yunaaytid Isteets Haala Tigraay Keessaa Laalchisee Gola Naga Eegumsa Tokkummaa Mootummootaf Ijjannaa Ishii Ibsite
Ebla 17, 2021
Har’a Yunaayitid Isteetis gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf irra deebi’uu dhaan, haalli namoomaa fi ka mirga namaa naannoo Tigraay keessaa hammaataa dhufuun yaaddessaa ta’uu ta’uu isaa fi loltoonni Eertraa yeroo hin murtaa’iniif Tigraay keessa turuuf jecha yunifoormii waraana Itiyoopiyaa gargaaramuu isaanii kan mul’isu gabaasaalee qabatamoon jiraachu ibsitee jirti.
Mootummaan Eertraa hatattamaan humnoota isaa Itiyoopiyaa keessaa baasuu qaba jedha ibsi kun.
Gabaasaalee humnaan gudeeddii suukaneessoo ta’an fi ibsuuf rakkisaa ta’e hookkarri quunnamtii saalaa ilaalchisee dhiyaataa jiru hedduu nu sodaachisee jira. haleellaalee kana waliin wal qabatee kan dhufu dhiibbaan yeroo dheeraa hawaasaalee irraan miidhaa geessisa. Ibsi kun itti dabaluu dhaan akka jedhutti, Hookkara quunnamtii saalaa mara ni balaaleffanna, kanneen itti gaafatamoo ta’anis murtiitti akka dhiyaatan gaafanna.
Dhiittaa mirga namaa, yakkawwanii fi gochalee sukaneessoo ta’an kanneen dalagan akka itti gaafataman gochuuf murannoo muummichi ministeeraa Abiy qaban ni hubanna. Mootummaan Eertraas waadaa wal fakkaatu seenuu qaba. Waajjira komiishinera mirga namaa ol aanaa fi komiishiina mirgga namaa Itiyoopiyaa ka Tigraay keessaan gamtaan qorannaa geggeessame gammachuun simanna.
Qorannaa kanas hanga danda’ame hatattamaan akka xumuran illee ni yaadachiisna. Uummati Tigraay tilmaamaan kanneen miliyoona 5.2 ta’an hanqina midhaan nyaataan rakkataa kan jiranii fi gargaarsa kan eeggatan yoo ta’u, balaa beelaaf saaxilamoo dha. Namoota gargaarsa barbaadan argachuun amma iyyuu rakkisaa dha. Uggurri hangi tokko immoo humnoota Eertraan kan kaa’amee dha. Tigraayiif gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka ga’u gaafachuu itti fufna.
Yunaayitid Isteetis rakkoo namoomaa jiru furuuf gargaarsa iti dabalaa doolaara miliyoona $152 gumaachiteetti. Fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme kanaaf arjoomtonni sadarkaa addunyaas deggersa godhan akka dabalan waamicha dabarsina.
Dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu akkasumas mootummaan Itiyoopiyaa rakkoo jiruuf furmaata siyaasaa akka barbaadu, gargaarsa namoomaaf danqaa tokko malee daandiin akka saaqamu, dhiittaa mirga namaa rawwatameef qorannaan dhuunfaa fi kan sadarkaa addunyaa akka geggeessamu eeyamni akka kennamu, siivilotaaf eegumsi akka godh
Barri Aangoo Prezidaantii Somaaliyaa Dheeressamuun Mormii Kakaase
Namoonni 8 Yuunaaytid Isteetes Keessatti Kaleessa Ajjeefaman
Iraan Hojii Albuudaa Yuraaniyam Gabbisuu Bifa Haaraan Har’a Egaltee Jirti.
Qabsaa’onni Hoong Koong Hidhaan Adabaman
Shawaa Kaabaa Keessatti Dhukaasii Dhaga’amaa Jira: Jiraattoota fi Angawoota
Tigraay Keessatti Tajaajilli Qorannaa Vaayrasii Koronaa Uummataa Jalqabuuf Jira